FAAH-FAAHIN: MAP oo Maanta Tababar u Qareemidda ah u Furtay Suxufiyiin – Radio Daljir
FAAH-FAAHIN: MAP oo Maanta Tababar u Qareemidda ah u Furtay Suxufiyiin
Luulyo 25, 2015 9:56 b 0
Sabti, Luuliyo 25, 2015 (Daljir)—Ururka ay ku Mideysan yihiin Suxufiyiinta Puntland ee MAP ayaa Tababbar socon doona muddo laba maalin ah maanta Magaalada Garoowe uga furay qaar kamid ah Wariyayaasha Puntland oo tiro ahaan gaarayay ilaa iyo 20 Suxufi.
Tababarkan ayaa diiradda saaraya u qareemidda xeerarka saxaafadda Puntland iyo sidii warbaahinta gobolka ay galaan-gal ugu yeelan lahayd in aan lagu xad-gudbin xoriyadda saxaafadda ka howl-gasha guud ahaan Puntland.
Guddoomiyaha ururka MAP Faysal Khaliif Barre ,madaxa tababarada ururka Maxamed Siciid Saalim ,mas’uuliyiin horey xilal uga soo qaybtay Puntland iyo xubno matalayay ururada aan dowliga ahayn ayaa ka soo qayb-galay furitaanka tababarkan.
Gudoomiyaha ururka MAP Faysal Khaliif Barre oo shirka furay ayaa sheegay in kulankan uu muhiimad gaar ah u leeyahay dhammaan Suxufiyiinta Puntland, waxaana uu u mahad-celiyay hay’adda National Endowment For Democracy (NED) oo ururka ka taageertay qaybashada Tababarkan.
“Waxaan tababarkan u Qabanay sidii Wariyeyaasha Puntland ay faham dhamaystiran uga Heli lahaayeen waxay tahay u Qareemid iyo waliba Galaan-gal,\_” ayuu yiri Guddoomiye Faysal Khaliif oo goobta ka jeediyay khudbad uu dhinacyo badan ka hadlay.
“Wariyayaasha halkan jooga waxaa laga soo dhex xuli doono guddi MAP kala shaqeeya samaynta daneeyayaal bah-wadaag la ah saxaafadda Puntland si loo helo xeer saxaafadeed oo horumarsan oo hadana qeexaya xoriyadda iyo madax banaanida,“ ayuu mar kale yiri Khaliif.
Wasiirkii hore ee Warfaafinta Puntland, Cabdixakiin Guuleed Warsame oo goobta hadal kooban ka jeediyay ayaa sheegay inuu Fahan-sanyahay Caqabadaha haysta wariyayaasha ka howl-gala Somaaliya, waxaana uu sheegay in MAP uu kala shaqayn doono arimo badan.
Ururka MAP ayaa bilihii la soo dhaafay dadaal balaaran ugu jiray sidii wax kabadal loogu samayn lahaa qodobo ku jira xeerarka saxaafadda Puntland oo kal hore la hor-geeyay barlamaanka Puntland ,waxaana wariyayaashu ay dareen adag ka muujiyeen in la dhaqan-geliyo qodobadaas oo lagu sheegay in ay xadidayaan xoriyadda hadalka ee wariyaha.
Ugu dambeyn, madaxa Tababarrada MAP, Maxamed Siciid Saalim ayaa isna sheegay in Tababarkan uu muhiimad gaar ah u leeyahay wariyayaasha kasoo qayb-galay, waxaana Xubnihii shirka uu ugu baaqay in loo istaago sidii loogu midoobi lahaa u Qareemidda Saxaafadda Puntland.
Jihadi John oo ka Baxsaday Daacish
DHAGAYSO:Wasiirka Xanaanada Xoolaha Puntland oo Kormeeray Maxjarrada Boosaaso